Wasiirka amniga oo shaaciyay in gacanta lagu dhigay madaxii amniyaadka Al-shabaab ee Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka amniga oo shaaciyay in gacanta lagu dhigay madaxii amniyaadka Al-shabaab ee Muqdisho
Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow “Ducaale” ayaa maanta shaaca ka qaaday in howlgal ay ciidanka amniga ka fulliyeen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ay kusoo qabteen madaxii amniyaadka kooxda Al-shabaab ee gobolka Banaadir C/wahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaano (Ciise Tarabuun).
“Howlgal ay ciidankeena ka fulliyeen suuqa Bakaaraha ayaa waxay kusoo qabteen madaxii amniyaadka kooxda Al-shabaab C/wahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan (Ciise Tarabuun), kaas oo mas’uul ka ahaa dhibaatooyinkii ka dhacaayay magaalada Muqdisho, wuxuuna hadda ku jiraa gacanta dawladda oo caddaaladda ayaana la horgeynayaa” Sidaas waxaa yiri wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow “Ducaale”.
Dhinaca kale, wasiir Islow ayaa ka hadlay qaar ka mid ah wadooyinka ku yaalla xaafadaha magaalada Muqdisho oo la xiray, wuxuuna arrinkaasi ku macneeyay inuu yahay mid lagu adkeeynayo amniga caasimadda, isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in dulqaad ay muujiyaan maadaama waxa laga shaqeeynayo ay yihiin amni, una baahan yahay feejignaan dheeri ah.
“Ciidanku waxay sameyn doonaan wax walba oo suurta-gal ah oo amniga lagu adkeeynayo, waxaa la xiray qaar kamid ah wadooyinka dhex-mara xaafadaha gobolka Banaadir, uljeedka loo xirayna waa in lagu bad-baadinayo shacabka Soomaaliyeed. waxaan maalin walba qaraxyada iyo dhibabka ay geystaan argagixisadu ku weynaa nafta dadkeena qiimaha badan, si taas looga baaqsado waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo amniga caasimadda lalana shaqeeya ciidamadda howlgalka ku jira” Ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka amniga.
Hadalkaan kasoo yeeray wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow “Ducaale” ayaa kusoo beegmaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeysay, ciidamada xasillinta amniga Muqdisho ay xireen qeybo ka mid ah wadooyinka ku yaalla degmooyinka gobolka Banaadir.